download ရယူရန် Firefox9| Linux မှ
Firefox9ကိုရယူနိုင်သည်
ဓလေ့ထုံးစံအရကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည် တယောက်က FTP de Mozilla က ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါရန် Firefox 9တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပေပေမယ့်။
သတင်းကငါ့ဆီပါ GEspadas သူငယ်ချင်း၏ဘလော့ဂ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် algorithm အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည် java Script အများကြီးပိုမြန်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးသောဤဗားရှင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါပြောပြလိမ့်မယ်🙂
interface ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောတိုးတက်မှုများမရှိသော်လည်းအချို့သောတိုးတက်မှုများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပါကမျက်နှာပြင်အပြည့်အစုံကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဥပမာ ဒါကြောင့်ယခုအဘို့စမ်းသပ် API ကိုပေမယ့်။ တံဆိပ်များအတွက်ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည် CSS3 နှင့်တိုးတက်မှု HTML5.
Firefox ကို9အတွက် Linux ကို de 32 -bits:
En စပိန် de Espana (es-es)
En အင်္ဂလိပ် de အမေရိကန် (ယူအက်စ်တွင်)
Firefox ကို9အတွက် Linux ကို de 64 -bits:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Firefox9ကိုရယူနိုင်သည်
Huy ငါ ၈ ခုအထိတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ ၉ ယောက်ထဲမှာရှိပြီးပါပြီ။
အတူတူပါပဲ .. U_U
Ubuntu repositories မှတစ်ဆင့်? wow မြန်မြန်ပဲ ..
အားနည်းချက်မှာ plugins အများစုကို disable လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
O_O သည် Kubuntu တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာမျှမပေါ်ပါ
QupZilla - GNU / Linux နှင့် Windows အတွက်နောက် browser တခုဖြစ်တယ်
LMDE အတွက် Realtek RTL8111 / 8168B Troubleshoot